December 1, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Ethiopia’s Prosperity Party officially formed in the capital Addis Ababa – borkena.com
Ethiopia News December 1, 2019
Ethiopia’s Prosperity Party officially formed in the capital Addis Ababa borkena.comSii akhriso
Barcelona oo guul dirqi ah kaga soo gaartay Atletico Madrid garoonka Wanda Metropolitano…+SAWIRRO
Cayaaraha December 1, 2019
(Madrid) 01 Dis 2019. Barcelona ayaa guul dirqi ah kaga soo gaartay kooxda Atletico Madrid garoonka Wanda Metropolitano, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray babaro 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay ciyaarta, labada kooxood […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Atletico Madrid Iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
(Madrid) 01 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Atletico Madrid Iyo Barcelona kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka La Liga. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Atletico Madrid Iyo Barcelona: Atletico Madrid XI: Barcelona XI: Gool FM.Sii akhriso
Man United oo barbaro la gashay kooxda Aston Villa oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford…+SAWIRRO
(Manchester) 01 Dis 2019. Kooxaha Manchester United iyo Aston Villa ayaa dhibcaha ku kala qeybsaday garoonka Old Trafford, kddib markii ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah. Daqiiqadii 11-aad kooxda martida aheyd ee Aston Villa […]Sii akhriso
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Maanta furay shirweynaha Qaran ee Dhallinyarada Soomaaliyeed+Sawirro
Soomaaliya December 1, 2019
Muqdisho-(SONNA)-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane; Xasan Cali Kheyr, ayaa Maanta daah furay shirweynaha Qaran ee Dhallinyarada Soomaaliyeed oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaaraha ayaa muujiyay sida ay Dowladda Soomaaliya uga go’an tahay mudnaan siinta Dhallinyarada oo Laf-Dhabar u ah horumarka Bulshadda iyo ilaalinta Qaranimada. Sii akhriso
Norwich City oo taako u dhigtay kooxda Arsenal…+SAWIRRO
(England) 30 Nof 2019. Kooxaha Norwich City iyo Arsenal ayaa dhibcaha ku kala qeybsaday garoonka Carrow Road, kddib markii ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-1 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Norwich City. Daqiiqadii 2-1-aad kooxda […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Man United Iyo Aston Villa ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(Manchester) 30 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Manchester United Iyo Aston Villa kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Manchester United Iyo Aston Villa: Man United XI: Aston Villa XI: Gool FM.Sii akhriso
Man United oo qaaday tallaabo ay ku dooneyso soo xero galinta xiddig ka tirsan Barcelona
(Manchester) 01 Dis 2019 Manchester United ayaa qaaday talaabo ay ku dooneyso saxiixa ciyaaryahan ka tirsan kooxda Barcelona inta lagu gudi jiro xilli ciyaareedkan, gaar ahaan suuqa furmi doono bisha Janaayo. Sida laga soo xigtay wargeyska “Mirror” ee dalka Ingiriiska, saraakiisha kooxda Man United ayaa waxay la xiriireen wakiilka Arturo Vidal ee Fernando Felicevich, si Sii akhriso
“Dhaawaca Ousmane Dembélé khasaaro weyn ayey u tahay Barcelona” – Tababare Valverde
(Barcelona) 01 Dis 2019.Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa ka hadlay dhaawaca xiddigiisa reer France Ousmane Dembélé, kaasoo waqti dheer ka maqnaan doona Blaugrana. Ernesto Valverde ayaa wuxuu dhinaca kale carabka ku adkeeyay in maqnaanshiyaha Ousmane Dembélé ay tahay Khasaaro weyn ee soo gaartay kooxda. Ousmane Dembélé ayaa wuxuu dhaawac ka soo gaaray Sii akhriso
Muqdisho (SONNA)- Shirkaan oo ay ay Ka qeyb galayaan dhallinyaro Soomaaliyeed ayaa waxaa soo qaban-qaabisay Wasaaradda Dhallinyarada Iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Shirkaan oo ah mid sanadle ah ayaa looga hadlaa caqabadaha iyo Horumarka Dhalinyarada Soomaaliyeed oo waqtigaan wajahaya daruufo kala gedisan, kuwaasi oo isagu jira dhinaca Nolosha, Sii akhriso